Home Wararka Taliyaha Hoggaanka Caafimaadka NISA Oo La Xiray
Ciidamada hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa xalay waxa ay xabsiga dhigeen Taliyaha Hoggaanka caafimaadka ee hay’addaasi.
Dr. Xasan Axmed Maxamed Gacal ayaa la xiray kadib markii shalay uu gaarigiisa ku qarxay bannaanka hore guri uu ka deggan yahay magaalada Muqdisho, isaga oo ka badbaaday qaraxaasi.
Ehlada Gacal ayaa sheegay in qaabka loo xiray aan ahayn mid uu mudnaa, islamarkaana loo diidey ehelkiisa iney ogaadaan halka la geeyey.
Laamaha ammaanka weli kama aanay hadal xarigga Dr. Gacal iyo sababaha ka dambeeya.
Warkaan wixii kusoo kordha kala soco halkan
Previous articleFaah faahin:Haweney isku dishay Muqdisho
Next articleMareykanka oo sheegay inuu dilay dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab
Dowladda Mareykanka oo ka hadashay duqeyn markale ka dhacday Gobolka Mudug
Itoobiya Oo Ciidamadeeda Kala Baxeysa Xaduudka Eritrea